40 Vavaky ny famonjena amin'ny lehilahy matanjaka | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka 40 Vavaky ny famonjena amin'ny lehilahy matanjaka
Salamo 118: 1-29:
1 Mankalazà an'ny Tompo; fa tsara izy, satria maharitra mandrakizay ny famindram-pony. 2 Aoka ny Isiraely hanao hoe: Mandrakizay ny famindram-pony. 3 Aoka ny taranak'i Arona hanao hoe: Mandrakizay ny famindram-pony. 4 Aoka izay matahotra ny Tompo hanao hoe: Mandrakizay ny famindram-pony. 5 Niantso an'i Jehovah aho, raha ory; namaly ahy ny Tompo, ka napetrany tamin'ny toerana lehibe. 6 Ny Tompo momba ahy; Tsy hatahotra aho: inona no azon'ny olona atao amiko? 7 Ny Tompo dia mandray anjara amin'izay manampy ahy, ka dia ho hitako izay mankahala ahy. 8 Tsara kokoa ny matoky an'i Jehovah Noho ny matoky ny olona. 9 Tsara kokoa ny matoky an'i Jehovah Noho ny matoky ny mpanapaka. 10 Ny firenena rehetra nanodidina ahy; fa ny anaran'i Jehovah no handringanako azy. 11 Nanodidina ahy izy; eny, nanodidina ahy izy; fa ny anaran'i Jehovah no handringanako azy. 12 Nanodidina ahy tahaka ny renitantely izy; Voavono tahaka ny afon'ny tsilo izy; fa amin'ny anaran'i Jehovah no handringanako azy. 13 Nisakana ahy hianjera aho, fa namonjy ahy ny Tompo. 14 Jehovah no heriko sy fiderako, ka efa famonjena ahy izy; 15 Ny feon'ny mifaly sy ny famonjena dia ao an-dain'ny marina; ny tànana ankavanan'ny Tompo manao hery. 16 Misandratra ny tanana ankavanan'i Jehovah; ny tànana ankavanan'i Jehovah dia manao herim-po. 17 Tsy ho faty aho fa ho velona ka hitory ny asan'ny Tompo. 18 Nofaizan'i Jehovah mafy aho, fa tsy natolony ho amin'ny fahafatesana aho. 19 Vohay ny vavahadin'ny fahamarinana aho; hiditra ao aho ary hidera ny Tompo. 20 Ity vavahadin'ny Tompo izay hidiran'ny marina. 21 Hidera anao aho, fa efa nihaino ahy ianao ka tonga famonjena ahy. 22 Ny vato izay nolavin'ny mpanao trano dia tonga fehizoro. 23 Izao no asan'ny Tompo; mahagaga eo imasontsika izany. 24 Ity no andro nataon'i Jehovah; Hifaly sy ho faly isika. 25 Masìna ianao, vonjeo aho, ry Tompo: Tompo ô, mifona aminao aho, ambino ankehitriny. 26 Isaorana anie Izay avy amin'ny anaran'i Jehovah: Avy ao an-tranon'i Jehovah no nitahiany anay. 27 Andriamanitra Andriamanitra no nampahazava antsika; afatory amin'ny tady ny fanatitra ary hatramin'ny tandroky ny alitara. 28 Andriamanitro ianao ka hidera anao: Andriamanitro ianao ka hanandratako anao. 29 Mankalazà an'ny Tompo; fa tsara izy; fa mandrakizay ny famindram-pony.
Ny lehilahy matanjaka rehetra amin'ny fiainanao dia tsy ho hita anio amin'ny anarana Jesosy. Manolotra vavaka famaliana Andriamanitra isika, na oviana na oviana miantso Azy, Izy dia hamaly antsika haingana. Androany dia hijery lehilahy matanjaka 40 isika vavaka fanafahana, fa alohan'ny hidirantsika amin'ny vavaka famonjena dia aleo aloha mahazo fahalalana.
Iza no matanjaka? Ny lehilahy matanjaka dia mpandraharaha demonia, na demonia amin'ny razana izay manohitra ny fivoaran'ny fianakaviana. Fantaro izao, fa ny devoly sy ny demoniany no tena fahavalontsika, ary dia efa nandefa ny demoniany ho any amin'ny fianakaviana hanisy fahavoazana ihany koa izy. Ireo matanjaka dia tompon'andraikitra amin'ny mombamomba ny fianakaviana ratsy. Ohatra, mahita ny olan'ny momba momba ny tsy fiterahana ao amin'ny fianakaviana sasany, hatramin'ny taranaka mifandimby, i Abrahama ao amin'ny Baiboly dia nanana olana momba ny fiterahan-jaza, taona maro talohan'ny nahaterahany, Genesisy 12: 15-17, nanana olana koa i Isaka. rehefa niteraka izy, dia afaka taona maro vao nanomboka niteraka, Genesisy 25: 19-34, hitantsika ihany koa ny zavatra mitovy amin'i Jakoba sy ny vadiny Lea sy Rahely, ary i Rahely koa dia nanana olana momba ny momba momba ny Genesisy 30: 1. Ity karazana endrika ratsy ity dia avy amin'ny lehilahy matanjaka, ao amin'ny fianakaviana sasany ny fahantrany, ny sasany dia tara ny fanambadiana, ny sasany fa ny fahafatesany tsy misy toa izany, tsy misy olona miaina hatramin'ny vanim-potoana iray. Fa ny hatsaram-panahy dia izao, rehefa amboarantsika ny vavaka famonjena ity lehilahy mahery ity dia ho resy amin'ny anaran'i Jesosy ny matanjaka rehetra amin'ny fiainanao. Ilay Andriamanitra mamaly amin'ny alàlan'ny afo dia hampiseho ny tenany mafy amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy am-pinoana izao vavaka izao ary ampaherezo ny fidiran'Andriamanitra eo noho eo amin'ny fiainanao sy ny fianakavianao amin'ny anaran'i Jesosy.
1. Manala ny fifehezana ny fiainako amin'ny tanana sy ny fanapahana ny lehilahy mahery rehetra aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
2. Manala ny ho aviko amin'ny fitaomana sy fifehezana ny lehilahy matanjaka rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
3. Manafaka ny tenako amin'ny fanandevozana satana tsy fantatra aho ankehitriny !!!, amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Avelao haringana ny herin'ny demonia rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Avelao hiverina amin'ny alahelo ny fifalian'ny fahavaloko amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Avelao ny fikambanan'ny Tompon'ny afobe manohitra ny fiainako sy ny fiainako ho tapaka, amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Avelao ny mpamosavy sy ny mpanao ody rehetra maniry ny fahafatesako, manomboka mahazo vato afon'ny afo ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Notapahiko ny olana rehetra tamin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreniko tamin'ny anaran'i Jesosy.
9. Notapahako ny ziogan'ny fanandevozana rehetra, tamin'ny anaran'i Jesosy.
10. Avelao handeha ny toetra rehetra amin'ny tsy fahombiazako amin'ny fiainako ary avelao aho hahita ny toetran'ny fahombiazana, amin'ny anaran'i Jesosy.
11. Ny fahafaham-baraka ataon 'i satana no nanala baraka ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
12. Avelao ny fifalian'ny ratsy fanahy hody amin'ny alahelo mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Mialako amin'ny fanandevozan'ny fanahy razambe, amin'ny anaran'i Jesosy.
14. Hazo fianankaviana ratsy amin'ny fiainako, hongotana amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika.
15. Aoka ny fanandevozana rehetra avy amin'ny aretina nolovaina tamin'ny fiainako nivadika tamin'ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
16. Nambarako fa ny hery rehetra izay nanao ratsy ahy tamina fahavalo, dia mamoaka ny fitsaran'Andriamanitra ao amin'ny tobin'ny fahavalo araka ny voasoratra ao amin'ny Salamo 35.
17. Avelao ny mpanenjika ahy rehetra hianjera amin'ny fisainany, amin'ny anaran'i Jesosy.
18. Avelao ny tsodrano rehetra eo an-tànan'ny fahavaloko hafahana, amin'ny anaran'i Jesosy.
19. Avelao ho foanana ny teny ratsy rehetra notenenina nandritra ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
20. Ny olana rehetra mifatotra amin'ny anarako dia esory amin'ny anaran'i Jesosy.
21. Tompo ô, ambarao amiko ny tsiambaratelo rehetra momba ny fiainako izay mila fantariko amin'ny anaran'i Jesosy.
22. Aoka ny fifehezana ratsy rehetra sy ny satelita ara-panahy namboarina hamely ahy, handray ny afon'Andriamanitra, ary hodorana ho lavenona, amin'ny anaran'i Jesosy.
23. Mandidy ny feo hafahafa sy ratsy rehetra aho miantso ny anarako hangina, amin'ny anaran'i Jesosy.
24. Tompo ô, diovy aho amin'ny poizina ara-panahy sy ara-batana izay azoko tamin'ny sakafo, tamin'ny anaran'i Jesosy.
25. Ry Tompo, avelao ny ran'i Jesosy handro ny marika mpamosavy rehetra, mpanao ody ratsy sy olon-dratsy amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
26. Mijoro manohitra ny mpandrava rehetra aho amin'ny fandringanana ny fiainako hisy ampahany amin'ny anaran'i Jesosy.
27. Miorina amin'ny tsy fahalalako ny raharahan'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
28. Izaho dia mijoro manohitra ny toe-tsaina feno fialonana sy ny toe-tsaina mitarika ady amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
29. Mijoro manohitra ny fanahy izay tsy miasa amin'ny fitiavana amin'ny fiainako aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
30. Miantso ny afon'Andriamanitra, kotroka, varatra ary tafio-drivotra amin'ireo mpandinika ratsy ny fandrosoan'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy aho.
31. Avelao ny taova rehetra ao amin'ny vatako izay tsy miasa tsara handray ny fiantsoan'Andriamanitra ary manomboka miasa tsara, amin'ny anaran'i Jesosy.
32. Ny olana rehetra mifandray amin'ny anarako dia nofoanana amin'ny anaran'i Jesosy.
33. Avelao ny fonosina manafina ny lehilahy matanjaka amiko ho triatra, avelao hiseho izy ireo ary hofaranana amin'ny anaran'i Jesosy.
34. Ny kapitsako, dia miseho amin-kery izao, amin'ny anaran'i Jesosy.
35 Avelao hisokatra ny fomba rehetra hahomby amin'ny fahombiazana, amin'ny anaran'i Jesosy.
36. Aoka ny fahasoavana anie hihatra amin'ny fiainako avy amin'ny làlana rehetra manomboka anio, amin'ny anaran'i Jesosy.
37. Tapaka ny ziogan'ny fanilihana rehetra amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
38. Avelao ho tonga amiko ny fanosorana ny latsaka avy any an-danitra, amin'ny anaran'i Jesosy.
39. Tompo ô, raisiko anio ny lakilen'ny fanokafana ny varavarana rehetra ho amin'ny fitahiako, amin'ny anaran'i Jesosy.
40. Avelao ny hery hamantatra ny fikambanana ratsy no hianjera izao amiko, amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray ô, misaotra anao mihaino ny fivavahako amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratra20 Ireo teboka vavaka hanoherana ny fanafihana ara-panahy
Next lahatsoratra20 mfm ny vavaka momba ny fanafahana manokana
VAVAKA MITSANGA NY VOAFIDIAN'NY PLANE amin'ny taona 2021
Vavaka ho an'ny zanako marary
20 Vavaka mba hahombiazana sy fahombiazana